Xeerka Saxaafada oo maanta Golaha Wasiiradu ansixiyeen – Balcad.com Teyteyleey
Xeerka Saxaafada oo maanta Golaha Wasiiradu ansixiyeen
By Omar Mohamed	 On Jul 13, 2017
3.1- Saxaafaddu way u madax-bannaan tahay fulinta hawlaheeda saxaafadeed ama warbaahineed ee noocyada kala duwan ayadoo dhowreysa shuruucda iyo anshax-saxaafadeedka (code of conduct).
3.2- Xorriyadda hadalka iyo fikirka waxaa loo fulinayaa sida ku xusan Dastuurka ku meel-gaarka ah (Qod. 18aad) oo qeexaya xorriyadda ra’yiga iyo afkaarta, axdiyada caalamiga ah, kuwa qaaradeed iyo goboleed ee Soomaaliya ay qeybta ka tahay iyo xeerkan lagu dhaqan- gelinayo Dastuurka.
3.3- Dhammaan warbaahinta gaarka ah ama tan Dawladda wararkooda faaf-reeb laguma sameyn karo, haddii ay shaqadooda u gudanayaan si waafaqsan shuruucda dalka ama aan ka hor-imaanayn sharciga. lagumana qasbi karo faafinta warar u daneynaya dhinac gaar ah.
3.4- Waxaa reebban in warfaafinta madaxa bannaan lagu khasbo iney faafiyaan warar ka hor imaanaya maslaxadda dalka, nabadgalyada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada ama u danaynaya cid gaar ah.
4.1- Waxaa ka reebban warbaahinta xorta ah ee madaxa bannaan ha noqoto mid gaar ah ama mid dowladeed arrimaha soo socda:
B- Arrimaha ku xusan qodobka 3aad faqraddiisa 3aad ee xeerkan;
T- Baahin warar been-abuur ah;
J- Hurinta colaadda ama dhiirri-gelinta qabyaaladda; iyo
X- Dacaayad aan sal lahayn oo loola jeedo shakhsi ama hay’ad, baahin warar nacayb iyo xag-jirnimo ku salaysan.
5.1- Cid kasta oo ku xad-gudubta xeerkan ha noqoto wariye ama mas’uul xarun warbaahineed waxaa la raacayaa arrimaha soo socda:
B- In marka hore la siiyo digniin qoraal ah mas’uulka xarunta warbaahinta ama suxufiga;
T- Ganaax lacageed oo dhan shilin Soomaali u dhigma US$300 ilaa US$1,500 (Saddex boqol ilaa kun iyo shan boqol oo Doolar), kaasoo lagu ganaaxayo tifaf-tiraha, suxufiga ama mas’uulka xarunta warbaahinta ee jebiya sharcigan ama anshaxa warbaahinta;
J- Haddii suxufiga, reebbanaha ama mas’uulka xarunta warbaahintu ay u hoggaansami waayaan bixinta ganaaxa waqtigii loo xaddiday waxaa loo gudbinayaa maxkamadaha awoodda u leh;
X- Haddii suxufiga, tifaf-tiraha ama mas’uulka warbaahineed ay ku kacaan falalka ku xusan qodobka 3aad ee xeerkan waxaa loo gudbinayaa xeer-ilaalinta qaranka oo horgeynaysa maxkamadaha awoodda u leh; iyo
T- Hormarinta, dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaashaha warbaahinta;
J- Dhiirri-gelinta warbaahinta gaarka ah iyo tan guud oo leh hal-abuur xaqiiqada ku salaysan;
X- Horumarinta dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta iyo horumarinta u isticmaalka adeegsiga teknoolojiyadda; iyo
Kh- Dhiirri-gelinta iyo dammaanad qaadka jiritaanka qaybaha kala duwan ee warbaahinta si waafaqsan xeerkan.
B- Waa inay jirtaa baahi loo qabo warbaahintan waafaqsan tahayna qorshaha qaranka;
T- In codsaduhu leeyahay awood dhaqaale oo uu ku daboolo adeegga warbaahineed ee uu codsanayo bixintiisa; iyo
J- Waa inay dhiirri-gelinayso kala duwanaanta adeegga warbaahinta
11.1- Sharcigu wuxuu si cad u qeexayaa shuruudaha guud ee uu shati kasta wato waxayna noqonayaan sida soo socota:
B- Magaca qofka oo buuxa, shirkad ama urur, cinwaanka cidda codsanaysa;
T- Nooca warbaahinta iyo deegaanka looga baahan yahay in laga furo;
J- Dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in lagu gaaro; iyo
X- Cidda ka mas’uul ah maamulkeeda.
14.1- Waxaa lagu dhisay Xeerkan Guddi Madax-bannaan oo aqoon u leh saxaafadda iyo shuruucda dalka u yaal.
1. Ttirada Guddigu waxay noqonaysaa 09 (Sagaal) Xubnood oo ka kala imaanaya:
B) Warbaahinta Dawladda ……………… 3 xubnood;
T) Warbaahinta gaarka ah ……………… 3 xubnood; iyo
J) Ururrada bulshada rayidka ah …….. 3 xubnood
oo ka kala imaanaya: Xuquuqul Insaanka, Haweenka iyo Qareennada Soomaaliyeed.
1. Milkiile, Maamule, suxufi xarun warbaahineed u shaqeeya iyo Tifaftire waxaa ka reeban kamid-noqoshada Guddiga Saxaafada si looga fogaado danaha iska-hor-imaanaya (Conflict of Interest)
14.2- Magaca Guddiga waxa uu noqonayaa ‘Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed (GSS)’, waxaana lagu soo magacaabayaa sida soo socota:-waxaa golaha wasiirada u soo jeedinaya wasiirka wasaardda warfaafinta, kadib markii goluhu ansixiyana waxaa dikreeto ku soo saaraya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaaliya waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah.
Xilka qaadista guddigan waxaa loo marayaa qaabkii lagu soo magacaabey.
14.3- Guddiga ayaa noqonaya mid u madax-bannaan hawlaha fulintiisa loo igmaday, waxaana uu dhowrayaa sharciga oo keliya.
14.4-Guddiga waqtigiisu wuxuu noqonayaa 2 sano oo loo cusbooneysiin karo haddii loo baahdo.
B- Geeri ama arrin kasta oo si lama fillaan ah ugu timaadda xubinta keentana iney xilkeeda gudan weydo;
T- Xilka oo xubintu iska casisho;
J- Waqtiga xilka oo ka dhammaada; iyo
X- Xukun Maxkamdeed oo ku dhaca xubin kasta oo guddiga ka mid ah.
15.1- Ilaalinta anshaxa suxufiyiinta ka shaqeeya saxaafadda iyo ku dhaqanka xeerka saxaafadda Soomaaliyeed
15.2- Xallinta khilaafaadka ka dhasha ku dhaqanka xeerkan.
15.3- Dhexdhexaadinta iyo xallinta gefafka laga tabanayo saxaafadda dawladda iyo tan gaarka ah, marka laga reebo wixii fal-dembiyeed ah.
15.4- Abaalmarinta iyo anshax marinta suxufiyiinta, tifaf-tiraha iyo mas’uuliyiinta xarumaha saxaafadda.
15.5- Ka tala bixinta siinta iyo kala noqoshada rukhsadaha si ay wasaaraddu go’aan uga qaadato.
15.6- Xallinta cabashooyinka ka yimaada suxufiyiinta, warbaahinta, hay’adaha kale iyo bulsho weynta marka laga reebo wixii fal-dembiyeed ah.
15.7- Diyaarinta iyo u gudbinta wasaaradda miisaaniyadda guddiga.
18.1- Qof kasta oo ku shaqaynaya xirfadda saxaafadda waxaa lagu qorayaa
diiwaanka suxufiyiinta ka dib marka la hubiyo xirfadiisa saxaafade isla markaana Guddiguna u soo gudbiyo Wasaaradaha Warfaafinta Dalka ka jira si loo siiyo warqadda aqoonsiga suxufinimada ka dib marka uu buuxiyo shuruudaha.
18.2- Suxufiyiinta shisheeye ee wakiilka ka ah wakaaladaha wararka shisheeye, idaacadaha iyo taleefishanada waxay dhowrayaan shuruucda dalka, mana lagu dhaqayo faqradda 1aad ee qodobkan, hase yeeshee wariyeyaasha shisheeye ee madaxa bannaan ee aan cidna wakiilka ka ahayn waa in ay soo buuxiyaan faqradda 1aad ee qodobkan.
19.5- Warbaahin kasta waxay yeelanaysaa cinwaan loogu soo hagaago sida cinwaan degaan, Sanduuq Boosto, telefoon lambar iyo e-mail.
19.6- waxaa reebban in la diiwaan-geliyo Hay’ad warbaahineed oo aan soo dhammeystirin shuruudaha kor ku xusan.
22.1- Hay’adda warbaahineed ee hore loo siiyey rukhsad, lana diiwaan-geliyey, waxay waayi kartaa xaqa rukhsadda, haddii ay ku hawl-geli-weydo muddo 6 (lix) bilood ah ama hakad galo adeeggeeda muddo dhan 3 bilood, isla markaana aan xiriir la soo sameyn Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed oo aysan diiwaan-gelin sababo maan-gal ah oo keenay dib-u-dhaca.
22.2- Waxaa kaloo lagu wayn karaa in Hay’adda warbaahintu ku xad gudubto xeerkan
lagana gaaro go’aan kama dambeys ah oo muujinaya ineysan u qalmin ka
24.2- Is-beddel kasta oo lugu sameynayo milkiyadda ama magaca warbaahinta waxaa lagu wargelinayaa Wasaaradda Warfaafinta, Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed
iyo Maxkamadda Gobolka (haddii dacwadi jirto) si loo diiwaan-geliyo is-beddelka ku yimid hay’adda warbaahineed.
25.2- Wasaaradda Warfaafinta iyo Guddiga Saxaafadda oo la-tashanaya Ururrada saxaafadda dalka waxay diyaarinayaan xeer hoosaadka anshaxa guud ee saxaafadda, kaas oo dejinaya qodobada la xiriira arrimaha ay ka mid yihiin:
B- Qadarinta Diinta Islaamka iyo dhaqanka suubban ee Soomaaliyeed.
T- Saxnimada iyo sugnaanta wararka iyo barnaamijyada, iyo ilaalinta ilaha qarsoon ee macluumaadka bixiya haddii aysan maxkamadi amrin in la sheego.
J- Ka-fogaanshaha faafinta ama daabacaadda muuqaallada iyo sawirrada ka hor imanaya anshaxa suubban ee bulshada.
X- Ilaalinta xaquuqda carruurta, sida in aan lugu takrifalin muuqaallada muujinaya duruufaha gaarka ah ee carruurta iyadoo aan oggolaansho rasmi ah laga haysan cidda ka mas’uulka ah ama maxkamad.
KH- Ixtiraamidda nolasha gaarka ah ee qofka, marka laga reebo xaalladaha lagu dhawrayo danaha guud ee dadweynaha.
D- Ka-fogaanshaha faafin muuqaallo naxdin leh sida jirka bani-aadamka oo la googooyey, fara-xumeyn iyo sawirro argagax ku abuuraya bulshada.
Warbaahin aan Sharciyeysneyn
29.1- Waxaa reebban in la faafiyo warar ama qoraallo been ah iyo dacaayad lid ku ah sharafta muwaadin, shakhsiyaad, hay’ad ama dawladda, iyadoo Warbaahintii falkaas ku kacda laga doonayo caddeyn dhab ah, haddii kale iney:
B- Raalli-gelin qoraal ah iyo saxid ka bixiso gefkeeda, kuna faafiso (qormada 1aad ee bogga hore) ee lagu daabacay ama isla barnaamijkii warbaahinta laga sii daayey warka, iyadoo raali-gelintaas ku sameynaysa muddo aan ka badnayn 48 saacadood gudahood laga bilaabo marka ay cabashadaasi soo gaarto;
J- Haddii muwaadinka, qoyska, hay’adda ama Dawladda lagu been abuurtay ama la sharaf dilay ku qanci waayaan raalli-gelinta la bixiyey, waxay xaq u
leeyihiin in ay u gudbiyaan maxkamadaha awoodda u leh dacwad lid ku ah been- abuurkaas ayagoo ku soo bandhigaya cabashadooda.
32.1- Sharcigan wuxuu dib u howl galinayaa wakaaladda wararka Soomaaliyeed (SONNA) oo ay shaqadeedu tahay ururinta, gudbinta iyo qaybinta wararka dawladda sidoo kale (SONNA) waxay ururisaa wararka kale ee dalka, waana isha laga helo xogta dhabta ah ee dalka.
32.2- SONNA waxay ka jawaabeysaa codsiyada iyo baahida xogeed ee warbaahinnada Dawladda, kuwa gaar ahaaneed iyo kuwa caalamkaba.
32.3- SONNA waxay soo xigan kartaa wararka wakaaladaha caalamka iyo warbaahinnada gaar ahaaneed ee gudaha iyadoo xuseysa magaca warbaahinta ay soo xigatay.
33.1- Xeerkani wuxuu xaqiijinayaa dhowrista sharciyeed ee ay helayso warbaahinta Bulshada (Public Broadcasting Service) oo u madax-bannaan tafaftirka wararkeeda iyo mihnaddeeda saxaafadeed.
33.2- Adeegga Warbaahinta Bulshadu waa ka madax-bannaan yahay danaha mas’uuliyiinta dawladda, faragalin siyaasadeed iyo shirkadaha ganacsiga, iyagoo dhowraya shuruucda iyo anshaxa saxaafadda.
33.3- Barnaamijyada warbaahinta Bulshadu waa in ay ahaadaan kuwo dhex- dhexaad ah, xorna ka ah u-xaglin siyaasadeed, oo aan buunbuunin u sameynayn urur siyaasadeed, hay’adaha Dawladda, dano ganacsi ama fikrad shakhsiyadeed.
33.4- Barnaamijyada ka baxa warbaahinta Bulshada waa in ay kala duwanaadaan oo ay isugu jiraan kuwo ka hadla arrimaha bulshada, madaddaalo, waxbarasho iyo dhaqan looguna tala-galay qeybaha kala duwan ee bulshada, kana haqab- tiraya baahidooda warbaahineed.
33.8- Barnaamijyadu waa in ay muujiyaan dhaqanka suubban ee Soomaaliyeed, una soo bandhigaan caalamka.
33.9- Inta ay saamaxayso dhaqaalaha, farsamada iyo tiknoolajiyada hadba la heli karo, Warbaahinta Adeegga Bulshadu waa in ay qiimo la awoodi karo ku gaartaa dhammaan shacabka, oo aysan jirin koox gaar ah oo ka reebban in ay ka faa’iidaystaan.
33.11- Maadaama Warbaahinta Adeegga Bulshadu yahay mid madax-bannaan oo dhex- dhexaad ah, lacagaha ama taageero nooc waliba ah oo ay dawladdu siiso
waa ka madax-bannaan yihiin ujeeddooyin siyaasadeed iyo faragalin kale oo ka iman karta cid walba oo ay ku jiraan mas’uuliyiinta dowladdu.
35.1- Suxufi waxaa noqon karo qof kasta oo leh xirfad saxaafadeed ama ku dhex jiray
mihnadda saxaafadda muddo 2 (labo) sano ah ama ka badan sida ku cad qodobka 18aad ee Xeerkan.
35.2- Shaqaalaha kale oo aan ahayn suxufiyiinta ee ku hawlan saxaafadda iyo warbaahinta lehna waayo-aragnimo iyo aqoon la xiriirta xirfaddooda farsamo waxaa xil ka saran yahay inay dhowraan shuruucda, asluubta iyo anshaxa saxaafadda.
35.3- Hawl-wadeennada saxaafadda ee ku xusan faqradda 2aad
qodobkan waxaa la siinayaa dhawrista suxufiga oo kale.
35.4- Tixgelinta heerarka xirfadeed ee saxaafaddu waxay ka mid yihiin waajibaadka warbaahinta
36.2- Suxufigu waa in uu dhawraa sharafka, lahaanshaha gaar ahaaneed, xuquuqda iyo karaamada dadka uu wararka ka qaadayo iyo kuwa uu tabinayoba isagoo muujinaya qaddarin iyo tixgalin.
36.3- Suxufiga waxaa ka reebban in uu dheef ku helo xog ama sawirro gaar loo leeyahay haddii uusan oggalaansho ka helin cidda iska leh.
36.4- Suxufiga waxaa u bannaan in uu soo bandhigo xogaha la xiriira fal- dembiyeed dhacay, haddii uu hayo caddeyn ku filan ama aysan ka hor imaaneyn sharciga.
36.5- Mas’uuliyiinta warbaahineed oo kala ah milkiilaha, maamulaha , tafatiraha iyo weriyaha waxay mas’uuliyad ka saaran tahay hubinta in wararka iyo barnaamijyada ay baahinayaan yihiin kuwo xaqiiqada ku saleysan.
36.6- Haddii warbaahintu ama weriyuhu uu helo xog uu qarsoon yahay qofkii laga soo xigtey, waa in ay qiimeeyaan kalsoonida lagu qabi karo ilo-
wareedka iyo ujeeddada xogbixiyuhu isu qariyey haddii kale waxey masuul ka noqonayaan wixii ka yimaadda.
36.7- Haddii warbaahintu u aragto in qarinta il-wareedka ay u wanaagsan tahay ammaanka xogbixiyaha iyo tan qaranka, waa ay sii dayn karaan warkaas, ayagoo aan faafin isha ay ka heleen xogtaas hase yeeshee waxay keydinayaan xog-bixiyaha iyo xogtaba iyadoo lasoo badhigayo markii loo baahdo. Soo bandhigidda xog- bixiyaha ama xogtaba waxaa amri kara maxkamad haddii isqabad yimaado.
36.8- Haddii macluumaadka laga helay il-wareedka uu keenayo natiijo aan meel kale laga heli karin, isla markaana ay maxkamad soo codsatay in la ogaado bixiyaha xogta il-wareedka, waxay warbaahintu soo bandhigaysaa ciddii ay ka heleen il- wareedkaas iyo caddeymaha la xiriira kadib marka maxkammadda awooda u leh amarto ,maxkammadda ayaana go’aan ka gaareyso qaabka loola kulmayo haddii ay qarsoodi noqoneyso iyo haddii kale.
37.1- Suxufigu wuxuu xaq u leeyahay in la ilaaliyo amnigiisa, sharafkiisa iyo in uu mihnaddiisa ugu shaqeeyo si xor ah xogtana u soo bandhigo si waafaqsan xaqiiqada oo aan ka hor imaaneyn Qoddobka 36 aad faqraddiisa 1aad ee xeerkan.
37.2- Suxufiga waa in la siiyaa xog kasta si uu ugu gudbiyo bulshada haddii aysan jirin sabab sharciga waafaqsan oo loogu diidi karo.
37.3- Wasaaradda warfaafintu waxey u fududeyneysaa Suxufiyiinta fursadaha tababbarrada aqooneed oo kor loogu qaadayo aqoontooda xirfadeed si ay u gutaan waajibka ay bulshada u hayaan ha noqdaan kuwa dawladda iyo kuwa gaarka ahba.
37.4- Milkiileyaasha qalabka warbaahinta iyo warfidiyeenadu, waxay yeelan karaan ururo u gaar ah oo ay ku midaysan yihiin si ay u difaacaan danahooda.
37.5- Milkiileyaasha warbaahinta gaarka ah, waxay ilaalinayaan xuquuqda suxufiyiinta iyo farsamo-yaqaannada u shaqeeya iyagoo ula dhaqmaya sidan:
B- Waxey siinayaan mushaar u dhigma baahida noloshooda si loo ilaaliyo sharafta mihnadda saxaafadeed.
T- Waxey la galayaan heshiiska shaqada si waafaqsan sharciga shaqaalaha gaarka ah.
J- Illaalinta Saacadaha shaqada iyo fasaxyada.
X- Hubinta suxufiga in uu ku qoranyaha diiwaanka suxufiga heystana kaarka aqoonsiga suxufinnimo,sida uu qabo Qodobka 18 aad ee xeerkan.
Ilaalinta Xaqa Lahaanshaha (Intellectual Property Rights)
38.1- Warbaahinta waxa ay dhowreysaa xaqa lahaanshaha hal-abuurka ,curinta iyo qoraalada si waa faqsan shuruucda dalka iyo xeerarka caalamiga ah,waxaana la istimaali karaa oo kaliya marka fasax laga helo qofka ama hey’adda leh waxaana laga bixinayaa wixii cidda ogalaanshaha laga rabo ay ku qanceyso,waxaana lagu nidaamin doonaa xeer gaar ah oo ay soo saarto xukuumaddu.
38.2- Isticmaalka iyo xigashada xog ama ra’yi la soo min-guuriyey waxaa la xusayaa qofkii curiyey xogta la xiganayo, waxaana reebban in la soo minguuriyo xog aan la xusin ciddii curisay is la markaana aan laga heysan oggolaansho qofkii lahaa.
38.3- Waxaa reebban in la daabaco ama la badiyo qoraal, suugaan, sawirro, filimo, iwm oo aan oggolaansho looga haysan curiyaha ama soo- saaraha.
38.4- Haddii aan la dhawrin xuquuqda lahaanshaha ee ku xusan faqradda hore ee qoddobkan, qofka leh xaqa lahaanshaha ayaa xaq u leh in uu dacwad ka furto maxkamadda awoodda u leh si uu u ilaaliyo xaqiisa.
39.1- Cabashooyinka la xiriira warbaahinta waxaa iska kaashanaya xallintooda Wasaaradda Warfaafinta iyo Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed, Ururrada Saxaafadda Soomaaliyeed, haddii ay cidda ay khuseysa ku qanci weydo waxaa la horgeyn karaa maxkamadda awoodda u leh.
Kaalinta Wasiirka ee Hirgelinta Xeerkan
40.1- Wasiirka Wasaaradda Warfaafintu wuxuu awood u leeyahay:
B- Inuu hirgalinayo xeerhoosaadka lagu dhaqan-gelinayo Xeerka Saxaafadda oo ay ku heshiiyaan, wada jirna u soo saaraan Wasaaradda Warfaafinta iyo Wasaaradaha Warfaafinta Dowlad Goboleedyada iyo Guddiga Saxaafadda Soomaaliyeed hadday tahay Qodobka 5.1(T) oo ah ganaax lacageed, Qodobka 9.1 Bixinta Shatiyada, Qodobka 13.1 oo faraya Codsiga Rukhsadda Warbaahinta jirtay 45 maalmood gudahood marka sharcigu dhaqan-galo
Qodobka 17.1 Khidmadaha, Qodobka 18aad Diiwaan-gelinta Suxufiyiinta iyo Qodobka 34aad Khidmadda lagu fiirsado Telifishanka (TV-ga).
T- In uu fadhi deg-deg ah isugu yeeri karo Guddiga Saxaafadda xaalad jirta awgeed iyo
X- In uu qaadan karo go’aan deg-deg ah oo la xiriira amniga oo ka dhalatey hey’adaha warbaahinta
41.1- Xeerkani waa xeerka Saxaafadda Soomaaliyeed iyo Suxufiga Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana la baabi’iyey xeer kasta oo saxaafadeed oo ka soo hor- jeeda ama aan la socon karin Xeerkan.
42.1- Xeerkan wuxuu dhaqan-gelayaa marka uu ansixiyo Baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, Madaxweynuhuna saxiixo, laguna soo saaro Faafinta Rasmiga ah ee Dawladda.
The post Xeerka Saxaafada oo maanta Golaha Wasiiradu ansixiyeen appeared first on Ilwareed Online.
Soomaalida Iswiidhan ee diinta masiixiyadda heeysta oo cabasho afka furtay
Ra’iisal Wasaaraha oo khudbad dhinacyo badan u jeediyay shacabka Kismaayo